यु'वतीहरुको स'बभ'न्दा प'हिले पु'रुषको कु'न अ’ङ्गमा आ'खा जा'न्छ ? जानी राखौ
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:२७ प्रकाशित
एजेन्सी – युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अङ्गमा आखा जान्छ ? भनेर गरिएको एक सर्बेक्षण मा युवतीहरुको जबाफ सुनेर सब च’कित पर्ने एक तथ्य सार्बजनिक भएको छ।
धेरै युवती हरुले सर्बप्रथम पुरुषको प्रसनालिटिमा आखा जाने बताएका छन्।उनीहरुले पुरुष संग भएको भौतिक सुख वा आवरणमा देखिएको कुनै पनि बस्तु संग आकर्षक हुदैनन्। महिला हरुले कुनै पनि पुरुष संग नजिक हुनु भन्दा पहिले पुरुषका अनिबानि चाल चलन र उसको बिचारमा महिला ध्यान जाने गर्दछ नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । सायद पि’तृसतात्मक सोंच-चि’न्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । ***यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
सपनामा से’क्स ग’र्दाको फल यस्तो !
मानिसले देख्ने सपनाले जीवनमा केही न केही संकेत गर्ने ज्योतिषीहरु बताउँछन ।
सपनाको प्रकृति अनुसार त्यसले जीवनमा पनि थरी/थरीको संकेत गर्दछ । मानीसहरु जीवनको अनुभव, असफल काम, चाहना, आफ्नो जीवनमा परेका दुःखद घटना आदिका आधारमा मानिसले सपना देख्ने गर्दछन । कहिलेकाहीँ मानिसले कसैसँग शारीरिक सम्पर्कमा रहँदै गरेको पनि सपना देख्ने गर्छ । प्रायः युवाअवस्थामा यस्तो सपना देखिने गर्छ । जसलाई ‘नाइट फल’ पनि भनिन्छ । यस्तो सपनाको संकेत के हो त ?
शारीरिक सम्पर्कको सम्बन्धमा सपना देख्नु आमविषय हो । यस्तो सपनाले कामेच्छा अर्थात संभोगको संकेत दिन्छ । यस्तो सपनाको अर्थ हुन्छ कि तपाईंले प्रयास गरे पनि सम्भोगको आवश्यकता पूरा गर्न पाउनुभएको छैन ।
तपाईंको मस्तिष्कले दिएको संकेत यही हो । यस्तो सपनापछि आफ्नो दिमागलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ मानिसले अपरिचित व्यक्तिसँग पनि सम्भोग गरेको सपना देख्छन् ।
कुनै परिचित मानिसको स्वभाव वा व्यवहारबाट प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यस्तो सपना देखिन्छ । अरू कोहीजस्तो बन्न चाहेको अवस्थामा पनि यस्तो सपना देखिन्छ । त्यसैले यस्तो सपनाबाट बच्न आफ्नो व्यवहार सुधार्ने प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ ।
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १२:२७ मा प्रकाशित